लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि काङ्ग्रेस एक हुनुपर्छ : देउवा « News24 : Premium News Channel
काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षणका लागि पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता अनुशासित भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
काङ्ग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले वाम शक्ति लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत जान सक्ने सङ्केत देखिएकाले दलका नेता कार्यकर्तामा एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र बैंकिङलगायत क्षेत्रमा भएका उपलब्धि लिएर जनतामाझ जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, काङ्ग्रेस अछामका सभापति भरतकुमार स्वाँर, सांसद अम्बिका थापा कुँवर, पूर्वराज्यमन्त्री गोविन्दबहादुर शाह, पूर्वसांसद अक्कलबहादुर विष्ट, सम्मानित व्यक्तित्व सहप्राध्यापक भैरवबहादुर विष्ट, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र विक, सम्पर्क समितिका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्याय लगायतले अछाममा प्रहरीको गोली आँखामा चोट लागी विद्यार्थी अरविन विष्टमाथि भएको घटनाको छानविन गर्न माग गर्नुभएको थियो ।